Hosia 5 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
5 “Nụrụnụ okwu a, unu ndị nchụàjà,+ ṅaakwanụ ntị, unu ụlọ Izrel, geekwanụ ntị, unu ụlọ eze,+ n’ihi na ọ bụ unu ka ikpe a metụtara; n’ihi na unu bụ ọnyà+ e siri na Mizpa, bụrụkwa ụgbụ e ji sie ọnyà na Tebọ.+
2 Ndị dapụrụ adapụ emikpuwo onwe ha+ n’igbu anụ e ji achụ àjà,* anọwokwa m na-enye ha niile ndụmọdụ.+
3 Mụ onwe m maara Ifrem,+ Izrel ezoghịkwa ezo n’ebe m nọ.+ Ugbu a, Ifrem, i dinawo ndị inyom dị ka à ga-asị na ha bụ ndị akwụna;+ Izrel emerụwo onwe ya.+
4 Omume ha ekweghị ka ha lọghachikwute Chineke ha,+ n’ihi na mmụọ ịkwa iko+ dị n’etiti ha; ha amaghịkwa Jehova.+
5 Ihe Izrel ji anya isi agbawo akaebe megide ya;+ e mewokwa ka Izrel na Ifrem sụọ ngọngọ ná njehie ha.+ Juda esorowokwa ha sụọ ngọngọ.+
6 Ha chị ìgwè ewu na atụrụ ha na ìgwè ehi ha gaa ịchọ Jehova, ma ha achọtaghị ya.+ Ọ hapụwo ha.
7 Ha aghọwo Jehova aghụghọ,+ n’ihi na ha amụwo ụmụ si n’ebe ọzọ.+ A ga-eripịa ha na òkè ha n’otu ọnwa.+
8 “Fụọnụ opi+ na Gibia,+ fụọkwanụ opi na Rema! Tienụ mkpu agha na Bet-even+—n’azụ gị, Benjamin!+
9 Ifrem, ihe na-eju anya ka ị ga-aghọ n’ụbọchị ịba mba.+ N’etiti ebo niile nke Izrel ka m meworo ka a mara okwu a pụrụ ịtụkwasị obi.+
10 Ndị isi Juda adịwo ka ndị na-ewela ihe e ji kpaa ókè ala azụ.+ M ga-awụsa ha oké iwe m dị ka mmiri.
11 E mekpawo Ifrem ahụ́, ngwepịa e gwepịara ya ziri ezi,+ n’ihi na o kpebiri iso onye iro ya.+
12 M bụụrụ Ifrem nla,+ bụkwaara ụlọ Juda ihe na-akpata ire ure.
13 “Ifrem wee hụ ọrịa ọ na-arịa, Juda hụkwara ọnyá ya.+ Ifrem wee gaa Asiria+ zigara eze ukwu+ ndị ozi. Ma onye ahụ agwọlighị unu,+ ọ pụghịkwa ime ka ọnyá unu laa.+
14 N’ihi na m ga-adị ka nwa ọdụm nye Ifrem,+ m ga-adịkwa ka nwa ọdụm tojuru etoju nye ụlọ Juda. Mụ onwe m ga-adọgbu ha, m ga-agakwa buru ha, ọ dịghịkwa onye ga-anapụta ha.+
15 M ga-ala, m ga-alaghachi n’ebe m si ruo mgbe ha buuru ikpe ọmụma ha;+ ha ga-achọ ihu m.+ Mgbe ha nọ n’oké ihe isi ike,+ ha ga-achọ m.”+
^ Ho 5:2*
Ma ọ bụ, “n’igbu ọchụ.”
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D28%26Chapter%3D5%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl